Momba anay | Zhejiang Gogogo Mechanical & Electrical Co., Ltd.
Mazava ho azy fa mekanika sy elektronika
Ny motera elektrika voalohany dia noforonin'i Michael Faraday tamin'ny 1822. Herintaona monja no novolavolaina ny motera taorian'ny nahitan'i Hans Christian Ørsted fa ny fikorianan'ny herinaratra dia mamorona sahan'andriamby mifandanja. Ity motera tany am-boalohany ity dia tariby tsotra nilentika tao anaty vera merkurialy niaraka tamin'ny andriamby tao ambany. Rehefa nifandray tamin'ny batterie ny tariby dia nanjary nisy sahan'andriamby ary ity fifampiraharahana amin'ny sahan'andriamby nomen'ny andriamby ity dia nahatonga ny tariby hitodika.
Folo taona taty aoriana dia noforonina ny milina mpamokatra herinaratra voalohany, nataon'i Michael Faraday indray. Ity generator ity dia misy andriamby mandalo coil tariby ary mandroso ankehitriny izay refesin'ny galvanometra. Ny fikarohana sy fanandramana nataon'i Faraday momba ny herinaratra no fototry ny ankamaroan'ny fitsipika elektromekanika maoderina fantatra ankehitriny.
Ny fahalianana amin'ny elektromekanika dia nirongatra tamin'ny fikarohana momba ny fifandraisana lavitra. Ny fitomboan'ny indostrian'ny Revolisiona indostrialy dia nametraka ny fangatahana fifandraisana amin'ny intracontinental, mamela ny electromekanika hiditra amin'ny serivisy ho an'ny daholobe. Ny relay dia niandoha tamin'ny telegraphy satria fitaovana elektromekanika no nampiasaina hamerenana ireo fambara telegrafy. Ny switch Strowger, ny switch Panel, ary ireo fitaovana mitovy amin'izany dia be mpampiasa tamin'ny fifanakalozana telefaonina mandeha ho azy. Ny switch Crossbar dia napetraka voalohany tamin'ny taonjato faha-20 tany Suède, Etazonia, Kanada, ary Great Britain, ary niely haingana erak'izao tontolo izao ireo.
(ZHEJIANG GOGOGO MEECHANICAL & Electric CO., LTD, amin'ny maha mpanamboatra za-draharaha sy mpamatsy motera, paompin-drano ary vokatra derivative hafa.
AndriamatoaWeed Zeng no mpanorina, niasa tao amin'ny motera elektrika telo dingana,dingana tokana capacitor manomboka motera,Paompin-drano Centrigugal Pipeline, ary Paompy azo alentika ao anaty rano indostria nandritra ny 20 taona mahery, manompo mpanjifa an-jatony ary mahatakatra ny filan'ny mpanjifa isan-karazany.Hahafantatra ireo fiasa isan-karazany amin'ny vokatra.Raha ny fizotry ny asa dia nifanehatra tamina mpanjifa isan-karazany izy, ny mpanjifa sasany dia tsy mila vokatra tokana fotsiny. ny mpanjifa dia mila vokatra marobe. Mba hihaonana amin'ny filana manokana isan-karazany dia nanomboka nanolotra vokatra isan-karazany izahay. Ity dia afaka manampy ny mpanjifa mitsitsy fotoana be, mividy vidiny sy ezaka. Ny zavatra rehetra nataontsika dia nanatsara ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. .Ary mandritra izany fotoana izany dia nampiditra mpanjifa marobe hatrany ny mpanjifa satria afa-po amin'ny vokatra sy serivisinay izy ireo.
Ny marika "GOGOGO MOTORS" antsika manokana, "EASTOP MOTOR" dia malaza amin'ny tsena marobe mandroso, toa an'i Egypt, Sudan, Iraq, Morocco, Bangladesh, Philippines, Viatnam, Thailand, Ghana, Ethiopia, Srilanka, Poland, Spain, Turkey, Mexico, Etazonia, Costa Rica, Kolombia,
Nizeria, Kenya, sns. Mihoatra ny firenena 30.
Izahay dia miorina ao Zeguo roa, Wenling izay tsy lavitra afa-tsy 3 ora amin'ny seranan-tsambo Sinoa faha-2 lehibe indrindra. Manana orinasa mpamokatra motera herinaratra misy anay manokana izahay, ozinina paompin-drano, ary ozinina milina fanadiovana avo lenta. Miaraka amin'ny ekipanay R&D matanjaka, afaka manome serivisy OEM / ODM / OTM.dia manome ny vokatray ho an'ny ITT, ATLAS, CNP, WORDWIDE, sns mivantana na amin'ny alàlan'ny agents.we dia manondrana ny vokatra mihoatra ny 200 000 000 isan-taona.
Mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatray dia manana rafitra fanaraha-maso kalitao henjana izahay amin'ny fizotran'ny asa rehetra, ny fanodinana ny faritra, ny fanangonana ny faritra, ny fitsapana rehetra ka hatrany amin'ny famonosana entana. Mahazoa ny taha 100%, ny tahan'ny fahafaham-po an'ny mpanjifa 98%.
Ho fanohanana ny mpanjifantsika sy hanitarana ny tsenanay, afaka mangataka mari-pankasitrahana isan-karazany toy ny CE, TUV, ETL, UL, COC, SONCAP, COCQ, SAS0, sns izahay.
Manantena tokoa izahay fa hiara-hiasa amin'ny mpanjifantsika rehetra hamorona fahombiazana ary hizara ny tsiambaratelon'ny fahombiazantsika.
Vokatra avo lenta, serivisy faran'izay tsara, vidiny mirary, fandefasana ara-potoana
Io dia fitaovam-piadiana majika ho an'ny mpanjifantsika vaovao rehetra mba ho tonga mpanjifantsika taloha, ary koa ny fikatsahana maharitra.